Tantaran'ny hotely: Shelton Hotel New York dia manondro ny làlan'ny ho avy
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Tantaran'ny hotely: Shelton Hotel New York dia manondro ny làlan'ny ho avy
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Vitsy ny skyscrapers no talanjona toy ny 1924 Shelton Hotel ao amin'ny Lexington Avenue sy ny 49th Street, ankehitriny ny New York Marriott East Side.
Nanaiky ny mpitsikera fa ny façade misy rihana 35 misy endrika mahafinaritra sy famolavolana tsy fahita firy dia nanondro ny làlan'ny ho avy ho an'ny skyscraper.
Ny Shelton dia namboarin'ny mpandrafitra matihanina ara-maritrano James T. Lee, izay tompon'andraikitra tamin'ny trano fonenana roa manankarena ihany koa: 998 Fifth Avenue an'ny 1912 sy 740 Park Avenue an'ny 1930.
Izy no raiben'i Jacqueline Kennedy Onassis, teraka Jacqueline Lee Bouvier.
Ny fahitan'Andriamatoa Lee dia hotely bakalorea misy efitra 1,200 1923 misy toetra mampiavaka ny klioba: dobo filomanosana, kianja squash, efitrano familiana, solarium ary marary. Ny New York World tamin'ny taona XNUMX dia nilaza fa ny Shelton no trano avo indrindra eto an-tany.
Ny mpanao mari-trano, Arthur Loomis Harmon, dia nanarona ny biriky tamin'ny biriky mavo tsy ara-dalàna, nolavina toy ny efa an-jato taonina, ary nalaina avy tamin'ny Romanesque, Byzantine, Christian tany am-boalohany, Lombard ary ireo fomba hafa. Saingy talanjona kokoa ny mpitsikera fa nampatsiahy izy io fa “tsy nisy firafitra maritrano efa vita taloha”, araka ny namaritan'ilay mpanakanto Hugh Ferriss azy tao amin'ny The Christian Science Monitor tamin'ny 1923.
Ny Shelton dia iray amin'ireo trano voalohany naka ny endriny avy amin'ny lalàna zon'olombelona tamin'ny taona 1916 izay mitaky fihemorana amin'ny haavo sasany mba hahazoana jiro sy rivotra mankany amin'ny arabe. Izany no nahatonga azy tsy hitovy amin'ireo hotely misy boaty lava natao talohan'ny fanovana ny fizaran-tany, toa ny Hotel 1919 Pennsylvania, izay mifanandrify amin'ny Station Pennsylvania.
"Trano manahirana miaina," hoy i Helen Bullitt Lowry sy William Carter Halbert ao amin'ny The New York Times tamin'ny 1924. Ilay mpitsikera, Lewis Mumford, fatratra amin'ny fiderana, dia niantso azy io ho "mahaliana, finday, milamina, toy ny Zeppelin eo ambanin'ny lanitra madio ”tao amin'ny magazine Commonweal tamin'ny 1926.
Misy fetrany ihany anefa ny endrika fahitana ary ny atin'ny Andriamatoa Harmon dia toa tsy nitovy tamin'ny hotely goavambe hafa tamin'izany: efitrano fandraisam-bahiny lehibe, efitrano fisakafoana misy valindrihana mamirapiratra sy lalantsara vaventy lava. Ny ampahatelon'ny efitrano dia nizara fandroana, izay tsy maintsy nanjary fahasarotana tamin'ny faran'ny 1924, rehefa nivadika ny politikany ho an'ny lehilahy ihany ny Shelton. Ny galeriana avo iray dia nihazakazaka nanodidina ny kamory ambanin'ny tany, izay voaravaka tile vita amin'ny polychrom.
Nanomboka tamin'ny 1925 ka hatramin'ny 1929, dia nipetraka teo amin'ny rihana faha-30 amin'ny Hotely Shelton i Georgia O'Keeffe niaraka tamin'ny vadiny, ilay mpaka sary Alfred Stieglitz. Raha tsy misy ny Hotel Chelsea dia sarotra ny mieritreritra hafa New York City trano fandraisam-bahiny izay nisy fiatraikany lalina teo amin'ny mpanakanto, indrindra ny trano fandraisam-bahiny mety tsy henonao mihitsy.
Manakaiky ny arabe Lexington eo anelanelan'ny làlambe faha-48 sy faha-49, ilay efitrano misy rihana 31, Selton Hotel dia nohajaina ho toy ny skyscraper avo indrindra eran'izao tontolo izao rehefa nosokafana tamin'ny taona 1,200. Tsy vitan'ny hoe lava, fa fahita - trano fandraisam-bahiny kanto ho an'ny lehilahy amin'ny alàlan'ny bowling, latabatra billiard, court squash, fivarotana mpanety ary dobo filomanosana.
Ny tsy nisy fisalasalana velively dia ny maha-zava-dehibe ny rafitrano. Miaraka amina fotony misy rihana vatosoa misy rihana roa sy fihenan'ny biriky telo miakatra amin'ny tilikambo afovoany dia vaky ny tany. Ny mpitsikera dia nihevitra fa io no tranobe voalohany nahitana tamim-pahombiazana ireo fitakiana zona tamin'ny taona 1916 izay nametraka ny fihemorana hitazonana ireo trano ambony tsy ho lasa masonkarena.
Ny Empire State Building dia iray amin'ireo trano nitaona an'i Shelton. Tamin'ny faran'ny taona 1977, nanambara ny mpitsikera New York Times, Ada Louse Huxtable, fa “trano ambony any New York” ilay hotely.
O'Keeffe dia tsy afaka nangataka studio mifanaraka kokoa amin'ny toerany. Avy amin'ny tranony lava be, nankafy ny fomba fijerin'ny vorona ny renirano izy ary tsy hita soritra ny zava-boaloboka ao an-tanàna. Toa an'i Charles Demuth, Charles Sheeler ary mpanakanto hafa tamin'ny vanim-potoana niainany, O'Keeffe dia talanjona noho ny skyscrapers ho mariky ny maoderina an-tanàn-dehibe, fotokevitra iray fototry ny Precisionism, ny fomba kanto taorian'ny Ady Lehibe I izay nankalazana ny tetezana vaovao an'ny tetezana amerikana. , ozinina sy trano famaky.
Niorina tao amin'ny tranony Shelton izy, O'Keeffe dia namorona sary hosodoko sy sarina skyscraper sy sary an-tanàna 25 farafahakeliny. Anisan'ny fanta-daza indrindra aminy ny “Radiator Building — Night, New York”, fankalazana fatratra ny mystique fanaovana trano - ary ilay American Radiator Building mainty sy volamena malaza antsoina hoe Bryant Park Hotel ankehitriny.
Arthur Loomis Harmon, ilay mpanao mari-trano ny Shelton, dia nanohy nanampy tamin'ny famolavolana ny Empire State Building. (Namorona trano Allerton koa izy, trano fandraisam-bahiny mipetraka any 1916 New York izay avo).
Saingy nitifitra ny lanitra ny lazan'i Shelton taorian'ny fitsidihany ilay dobo filomanosana ambanin'ny tany tamin'ny taona 1926 avy amin'ilay artista nandositra Harry Houdini. Nasiana tombo-kase tao anaty boaty toy ny vatam-paty ny rivotra (na dia nisy telefaona iray aza raha sendra vonjy maika), dia nidina tao anaty pisinina i Houdini izay nilentika nandritra ny adiny iray sy sasany. Nipoitra tamin'ny fandaharam-potoana izy, reraka nefa velona. "Afaka manao izany ny olona rehetra," hoy izy tamin'ny The New York Times.
Na eo aza ny tantara maro loko sy ny mampiavaka azy amin'ny maritrano, The The Shelton, toa ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny efa antitra dia nankasitraka azy avokoa. Tsy nisy afa-tsy 11 ny mponina amin'ny fotoana feno tamin'ny tapaky ny taona 1970. Tamin'ny 1978 dia lasa Halloran'ilay fananana foreclosed izy io. Nanakarama an'i Stephen B. Jacobs izy handrafetana endrika ny atitany, ary ahena ho 650 ny isan'ireo efitrano.
Tamin'ny 2007 dia fananan'i Morgan Stanley izay nanolotra ny asany tany amin'ny orinasa Marriott.
Ny orinasan-trano sy ny orinasan-tsambo Superstructure dia manana fampielezan-kevitra lehibe amin'ny fanamboarana ivelany. Richard Moses, ilay mpanao mari-trano miandraikitra ny tetik'asa, dia nilaza fa ny antsipirian'ny avo lenta Atoa Harmon, ao anatin'izany ny loha, saron-tava, griffins ary gargoyles, dia mazàna, na dia maro aza ireo nokapohin'ireo singa manokana no nosoloina.
Nilaza Andriamatoa Moses fa Andriamatoa Harmon dia nampandeha kely ny rindrina hanomezana toerana malalaka an'i Shelton. Ny vokany, zara raha tsikaritra ho avo, dia miharihary amin'ny haavon'ny tany.
Ny anatiny tany am-boalohany ny trano fandraisam-bahiny tamin'ny 1924 dia nianjera hatramin'ny sombin-javatra, toy ny efitrano tohatra eo ankavanan'ny lobi lehibe. Tsy eo intsony ny kianja filokana; eo amin'ny toerany dia efitrano fanaovana fanatanjahan-tena amin'ny rihana faha-35 misy fomba fijery mahavariana hatrany an-dàlana. Ny trano fandraisam-bahiny dia nanome anarana efitrano taorian'ny Arthur Loomis Harmon, Alfred Stieglitz ary Georgia O'Keeffe.
Stanley Turkel dia notendren'ny Histories of America of 2020 ho Histories of the Year ho an'ny Histories Hotels of America, fandaharana ofisialin'ny National Trust for Histories Preservation, izay nanendrena azy tamin'ny 2015 sy 2014. I Turkel no mpanolotsaina hotely be mpanely indrindra any Etazonia. Izy dia miasa amin'ny fomban-kevitry ny consulting amin'ny trano fandraisam-bahiny izay miasa amin'ny maha-vavolom-pahaizana azy manokana amin'ny tranga mifandraika amin'ny hotely, manome ny fitantanana fananan-tany sy ny fizahan-tany momba ny hotely. Izy dia voamarina ho Master Hotel Supplier Emeritus avy amin'ny Educational Institute of the American Hotel and Lodging Association. [email voaaro] 917-628-8549
Ireo boky rehetra ireo dia azo alahatra avy amin'ny AuthorHouse amin'ny alàlan'ny fitsidihana panafis.ir ary tsindrio ny lohatenin'ilay boky.